Isilinganiso sokushintsha imali Yen (JPY) Ukuze Rand (ZAR) bukhoma ku-Forex exchange emakethe
Forex exchange rate olusha: 01/08/2021 13:41
Yen - Rand Intengo manje kwi Forex exchange emakethe ngesikhathi 01 August 2021
13:41:24 (Forex rate buyekeza 59 imizuzwana)
1 ZAR = 7.51 JPY
Ekushintshanisweni kwe-Forex kwe-1 Yen udinga ukunikela 0.13 ZAR. Isilinganiso sokushintshwa kwamasekhondi njalo ngemizuzwana engama-30. Ukubuyekezwa okuncane kwesilinganiso sokushintshwa kwe-inthanethi kusuka ekushintsheni kwe-Forex. Izinga lokushintshana lamanje likhona ngokushesha kwesayithi.
Ishadi Forex Ukuhweba Rand - Yen siphile, 01 August 2021
Ishadi Forex Ukuhweba Yen Ukuze Rand siphile, 01 August 2021
Sebenzisa ishadi lesilinganiso sokushintshana se Yen kuya Rand 01 August 2021. Ishadi elingaphezulu kwekhasi lenzelwe ukwenza kube lula kuwe ukubuka ushintsho lwamanani wokushintshanisa. Igrafu ikhombisa ngokushesha ukuguquguquka kwe Yen ku- Rand. I Yen livuselelwa ngokuzenzakalelayo.
Convert Yen Ukuze Rand Yen Ukuze Rand Isilinganiso sokushintsha imali Yen Ukuze Rand exchange rate umlando
Online ukuhweba Yen (JPY) ukuze Rand okwamanje
Njalo ngeminithi silandelela izinga lokushintshana. Isigaba se- Yen sikhuphuke ngo- 0.0001 ZAR ngomzuzu wokugcina. Umlando wamanani wokushintshanisa ngemizuzu yokugcina uboniswa kuthebula. Kuyinto elula ukuqhathanisa izinguquko kusilinganiso sokushintshana yonke iminithi.
Online ukuhweba Yen (JPY) ukuze Rand last Ukuhweba ihora
Izinguquko ku- Yen ku- Rand ingabukwa njalo ngehora. Ushintsho ku- Yen ( JPY) ku- Rand kulelihora - 0.0001 ZAR. Isayithi libonisa itafula lokuthumela amahora we-10 we Yen ku- Rand ngehora ngalinye. Amanani we- Yen ngehora abekwa etafuleni ukuze kulungele ukubona umehluko.
Online ukuhweba Yen (JPY) ukuze Rand mkhuba lanamuhla 01 August 2021
13:41 12:40 11:40 10:40 09:39 08:39 07:39 06:39 05:38 04:38